DaisyDisk, nke nwere ego 50% | Esi m mac
Ọzọ anyị na-agwa gị gbasara ngwa maka obere oge dị na mbelata ego dị maka obere oge. Nyaahụ egosiri m gị ego euro 10 nke dị na ngwa Fantastical 2, otu n'ime ngwa kachasị mma iji jikwaa kalenda anyị yana ihe ncheta. Taa ọ bụ oge nke ngwa nke na-enye anyị ohere ịme ka Mac anyị dị ọcha, dị ọcha nke faịlụ ndị ahụ na-agbakọ oge na-emetụta arụmọrụ. Anyị na-ekwu maka ngwa ahụ DaisyDisk, ngwa nke nwere ego mgbe niile nke euro 9,99, mana maka obere oge anyị nwere ike ịnweta ya na ọkara ọnụ, 4,99 euro.
DaisyDisk na-egosi anyị ozi niile anyị debeere na draịvụ ike anyị n’ụzọ dị iche karịa ka ọ dị na mbụ, site na gburugburu nke egosipụtara agba dị iche iche. Agba ọ bụla na-egosi anyị ụdị faịlụ dị iche, na-agwa anyị ụdị faịlụ dị iche iche na-eji draịvụ ike anyị. Ngwa a Ọ na-enye anyị ohere iwepu n'ụzọ dị mfe na ozi adịghị mkpa na Mac nakwa na ọ na-ewere ohere na-enweghị isi. Iji mee nke a, anyị ga-adọkpụrụ ngalaba dị iche iche egosiri na eserese ahụ na ala nke ihuenyo ahụ.
Ngwa a dị mma maka ndị ọrụ ahụ niile ọ na-amasị ha ịnweta ozi niile echekwara nke ọma na Mac ha n'oge niile na na site n'oge ruo n'oge, ha chọrọ ngwá ọrụ iji melite ya na-enweghị ịnyagharịa folda site na folda. Ọ bụrụ na ị bụ usoro nhazi na ị chere na ngwa a ga-adabara gị nke ọma, ị nwere ike kwụsị site na njikọ ndị a na ibudata a ikpe mbipute. Ọ bụrụ na ọ kwenye gị, jiri ohere ahụ zọpụta ọkara ọnụahịa nke ngwa a, ugbu a ọ dị ire.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » DaisyDisk, dị na mbelata 50%
Notepad App: Nhazi ndetu & Ederede Mfe Edemede, Launches Taa na Mac App Store